सक्रियता बढ्यो एसपी रानाको, पोखरामाबाट ९९० पोका खैरो हेरोईन सहित दुई जना पक्राउ ! – RadioMBC
Home > समाचार > सक्रियता बढ्यो एसपी रानाको, पोखरामाबाट ९९० पोका खैरो हेरोईन सहित दुई जना पक्राउ !
३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १०:३९
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले ९९० पोका खैरो हेरोईन सहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा पोखरा महानगरपािलका वडा नम्वर १० घलेचोक बस्ने जुना नेपाली र वडा नंम्वर १५ सुवास राना रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका ईन्द्रचोकबाट ब्राउन सुगर सहित उनीहरुलाई पक्राउ गरेको पत्रकार सम्मेलन गरि प्रहरीले जानकारी दिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिएको सादा पोशाकको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो । शंकास्पद अवस्थामा हिडी रहेका उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई खानतलसी गर्दा नौ ९९० पोका खैरो हेरोईन बरामद गरिएको प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दियो । पक्राउ दुवै जनालाई प्रहरी हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान भईरहेकोछ ।
यसैवीच कास्की प्रहरीले ४ थान मनि ब्याग सहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पसलहरुमा रहेका सिसि क्यामेराका फुजेटहरु मार्फत चोरीमा संलग्न उदयपुर गाईघाट सुन्दरपुर वडा नम्वर ६ घर भै हाल पोखरा १३ चिसापानी बस्ने विन्दा तामाङलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन गरी पोखरा नगर क्षेत्रमा चोरी गर्ने व्यक्तिको फलोअफ गर्ने र विभिन्न चोरी भएका पसलहरुमा रहेका क्यामेरा फुटेजहरु हेरी शसंकित व्यक्तिको खोजतलास गर्दै जादा तामाङ पक्राउ परेका हुन् ।